बढेको बढ्यै छ सुनको मूल्य, बिहिबार प्रतितोला कति बढ्यो ? — Sanchar Kendra
बढेको बढ्यै छ सुनको मूल्य, बिहिबार प्रतितोला कति बढ्यो ?
काठमाडौं । बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ८०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला ९६ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला ९७ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ९७ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै चाँदी प्रतितोला १ हजार ३४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि बुधबार चाँदी तोलामा १ हजार ३१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । केही दिनयता थोरै थोरै मूल्य घट्दै गएको सुनचाँदीमा आज फेरि मूल्य वृद्धि भएको हो ।
यस्तै उता निरन्तर बढिरहेको सेयर बजारमा साताको अन्तिम कारोबार दिन ‘करेक्सन’ देखिएको छ। आइतवारदेखि बुधवारसम्म निरन्तर बढेको सुचक बिहीवार ४ अंक घटेर १ हजार ४ सय ५८ मा आएको हो। कोभिडले लगानी गर्ने अन्य क्षेत्र नभएपछि सानादेखि ठुला लगानीकर्ता सबै सेयर बजारमा भित्रिएका छन्।
जसले गत केही दिनदेखि सुचक बढिरहेको थियो। बिहीबार भने लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गर्दा सुचक तल झरेको ब्रोकरहरु बताउँछन्। कारोबार सुरु भएदेखि सुचक थोरै बढ्दा पनि नाफा बुक गर्नेहरु आक्रामक देखिएका थिए। ‘सेयर बजार सँधै बढिरहने मात्र हुँदैन। केही दिनदेखि निरन्तर बढिरहेकाले विहीबार घटेको हो,’ ती ब्रोकरले भने।
सुचक थोरै घटेपनि कारोबार रकम करिब २ अर्व नजिक भएकाले भोलिका दिन सुचक फेरी माथि जाने संकेत देखिएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन्। सुचक घटेको मौका छोपेर सेयर खरीद गर्नेहरु पनि आएकाले बजार भोलिको दिनमा फेरि उक्लिने उनीहरुको अनुमान छ। बिहीबार १ सय ८८ कम्पनीको ४९ लाख ६७ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ। कुल १ अर्ब ९८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।
कारोबार भएका १२ उपसमुहको सुचकमा निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा र उत्पादनमुलक समुहको सुचक बाहेक सबै समुहका सेयरमा नाफा बुक भएको देखिन्छ। नौ समुहको सुचक घटेको छ।
बुधवारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार भएको एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको सेयर मुल्य ९.८२ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३ सय ६९ रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी २३ करोड १२ लाख ९४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
कर्पोरेट सँग सम्बन्धित
नेपाली बजारमा कति छ आज सुनचाँदीको मूल्य ? घट्यो कि बढ्यो